बिहानी पाख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा…. – Tufan Media News
बिहानी पाख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा….
२२ पुष २०७७, बुधबार २०:४८
राम्रो पढ्छु, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिन्छु, जीवनमा केही गर्नु छ, पुरूष भन्दा महिला कम हुनुहुँदैन, अरूसित आश्रित हुनुहुँदैन, आश्रित भयो भने हेप्छन् ।’ अहिलेका प्राय सबै महिलाहरू यसै भन्छन् । तर विडम्बना के छ भने पुरूष भन्दा महिला कमजोर नभए पनि श्रीमान भन्दा श्रीमती चाहिँ किन कमजोर नै हुन्छन् । महिला पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुँदा श्रीमान् र श्रीमती चाहिँ एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएको खासै देखिँदैन।
पुरुष भन्दा महिला कम्जोर भन्न कसैले पनि रुचाउँदैनन्, महिलाहरू कमजोर भन्न पनि मिल्दैन । वास्तवमै महिला कम्जोर हुने पनि होइनन्, कम्जोर बनाइने हो । तर कसले ? समय, परिस्थिति, पुरुष, दोस्री महिला वा आफैले महिलालाई कम्जोर बनाउँदै छन् ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन ।
खासमा भन्नु पर्दा पुरूषको विभिन्न कम्जाेरीले नै महिलाहरू कम्जाेर हुने गरेका छन् । पुरुषहरूको एकाधिकारवादी संकिर्ण सोच र सँधै जित्नै पर्ने प्रवृतिका कारण महिलाहरु कम्जोर बन्दै गएका छन् । त्यसैले त विवाह गर्ने बेला पुरूषहरूले प्राय: आफूभन्दा कम उमेरकी महिलालाई रोज्छन् ।
जब एक महिलाको विवाह हुन्छ तब उनी यही मनोकामना लिएर बसेकी हुन्छिन् कि उनको श्रीमानले उनलाई सधैँ खुसी राखोस् । महिलाले मात्र होइन समाजका हरेक प्राणीले यहि सोच्ने गर्दछ कि एउटा श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई सधैँ खुसी राख्नुपर्छ । श्रीमती पनि आफ्नो श्रीमानलाई यसैगरी खुसी राख्न चाहन्छिन् । श्रीमान–श्रीमती एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएका कारण दुबैको खुसी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
तर यदि कहिलेकाँही तपाईंको श्रीमान उदास देखिएमा तपाईंले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ तपाईंका श्रीमान् तपाईंका कारण नै दुखी भइरहेका छन् । तपाईंको कारण र अरु कसैका कारणले तपाईंको श्रीमान तनावमा भइरहेको तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्छ ।
धेरै पुरुषहरुको यहि गुनासो हुने गर्दछ कि उनका श्रीमती कहिले पनि उनको कुरा सुन्ने गर्दैनन् । त्यसकारण जतिबेला तपाईंका श्रीमान कुराकानी गर्न थाल्छन्, उनको कुरालाई निकै मन लगाएर सुन्ने गर्नुहोस् ।
थुपै्र पुरुषहरु श्रीमतीले उनीहरुको बित्तिय र अन्य जिम्मेवारीहरु बाँडोस् भन्ने चाहन्छन् । यदि तपाईंहरु दबैजना काम गर्नुहुन्छ भने घरखर्च चलाउने श्रीमानको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन । त्यसकारण दुबैजना मिलेर घरखर्च टार्नुहोस् ।
तपाईंको विवाह भइसकेपछि आफू आकर्षक देखिने कुरामा लाग्नुभन्दा आफ्नो श्रीमानको कामकाजमा ध्यान दिनुहोस् जसबाट उनलाई तपाईं हरेक समय उनको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने महसुस होस् ।
अनावश्यक रुपमा पैसा खर्च गरेको कुनै पनि श्रीमानलाई राम्रो लाग्दैन । तपाईंको बढिरहेको सपिङको बिलले तपाईंलाई तपाईंको श्रीमानबाट टाढा बनाइरहेको हुन्छ । यदि शपिङ गर्दा तपाईं आफ्नै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भने यसबाट उनलाई केहि पनि फरक पर्दैन ।
यदि आफ्नो श्रीमानलाई बेडमा खुसी राख्ने तरिका आउँछ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुनेछ । बेडमा अल्छीपन नदेखाउनुहोस् । श्रीमतीहरु आफ्नो श्रीमानसँग बेकारमा ब’हस गरेर कुरा लम्ब्याउने गर्दछन् । जसले गर्दा सम्बन्ध नै ख’तरामा पर्न सक्छ । तपाईं भने यस्तो गर्नबाट बच्नुहोस् ।
तपाईंलाई आफ्नो प्लान बनाउनका लागि श्रीमानको आवश्यक पर्दैन तर एक्लै केहि गर्नुभन्दा पहिले उनलाई त्यसको जानकारी दिनुहोस् जसले गर्दा उनलाई नराम्रो नलागोस् ।
कोही पनि साधारण पुरुष आफ्नी श्रीमतीले उनको लागि पनि समय निकालोस् भन्ने चाहन्छन् । यसो गर्नाले श्रीमानका लागि पनि केहि समय निस्कनेछ ।
महिलाले कहिले पनि आफ्नो श्रीमानबाट पैसाको हिसाब–किताब लुकाउनु हुँदैन । यदि श्रीमानले आफ्नो पैसा तपाईंबाट लुकाएर राखेमा के तपाईंलाई राम्रो लाग्छ ?
चाहे तपाईं लामो छुट्टीका लागि जान चाहेको कुरा होस् अथवा घरमा कोही नयाँ साथी आउने कुरा होस्, भविष्यको सबै योजना एकसाथ बनाउनुहोस् ।
जसरी तपाईं आफ्नो आमा–बुवालई माया र इज्जत गर्नुहुन्छ त्यसरी नै आफ्ना श्रीमानका आमा–बुवालाई सम्मान गर्नुहोस् । तपाईंहरु दुईमा श्रीमान–श्रीमतीको भन्दा साथीको सम्बन्ध बढि हुनु आवश्यक छ । आफ्नो श्रीमानको साथी बन्नुहोस्, ।
यस क्रममा एउटा अनौठो घटना घटेको छ जुन तपाईलाइ सुन्दै पनि अचम्म लाग्न सक्छ । आफ्नी पत्नीलाई एउटा बे’ग्लै ‘यौ’नजी’वन’को स्वा’द दिन चाहने व्यक्तिका कारण एक जना से’वक प्रहरीको फ’न्दामा मात्र परेनन्, कुरा अदालतसम्म पुग्यो तर अदालतले भने ती व्यक्तिले जानाजान कुनै गल्ती नगरेको भन्दै सफाई दिएको छ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित एक व्यक्तिले आफ्नो र पत्नीको सु’खका लागि नयाँ आइडिया सोचेर टेरेन्स लेरोय नामक व्यक्तिलाई भाडामा लिए। टेरेन्सलाई उनले भने, ‘हाम्रो जीवनमा अलि रो’माञ्च’कता थप्न बिहानीपख घरमा छि’र, त्यो बेला तिम्रो हा’त’मा’ ‘च ‘क्कु’ ‘हु’नुपर्छ र तिमीले हामी दु’वैबाट ‘अ’न्तःव’स्त्र (पे’न्टी) खो’से’र लै’जा’नु’पर्छ। यो कामलाई राम्रोसँग फत्ते गर्न सक्यौ भने तिमीले अतिरिक्त पैसा पनि पाउने छौ।’
यस्तै कार्यबाट गुजारा चलाइरहेका टे’रेन्स ले’रोयले सहमति जनाए तर दुःखको कुरा उनी जुन घरमा छि’र्नुप’र्ने अर्कैमा छिरेपछि उनी प्रहरीको फ’न्दा’मा मात्र परेनन्, अदालत नै धाउनुप-यो।
गएको साता अदालतले उनी त्यो घरमा कसैको ज्यान लिने सो’चले ह’ति या’र लिएर नपुगेको बरु गलत घरमा छि’रे’को पाइएको हुनाले उनको नियतमा ‘खो’ट नदेखिएको हुनाले उनको ग’ल्तीलाई मा’फी दिन सकिने बताएको छ।
यस्ता घटना दु’र्लभ हुनेसमेत जज सिन ग्रा’न्टले बताउँदै घटनाका सबुतहरुले लेरोयका गतिविधि नियतवश वा कसैलाई हा’नि पु-याउने किसिमको नदेखिएको हुनाले उनलाई कुनै का’र्बाही नगरिने बताएका हुन्।
घटनामा फेला परेका सामग्रीहरु सबै ‘यौ”न ‘फे”न्टा’सी’का ला’गि उ’पयोग हुने नै पाइएकाले प’क्राउ परेका व्यक्तिको नियत दुःख दिने वा चोरी गर्ने वा ह’ ‘त्या’का लागि नपाइएका हुनाले यसबारेमा का’र्बाही अघि बढाउन अनुपयुक्त रहेको अदालतले बताएको थियो।
यसरी श्रीमतीको चोर्लानका लागि उनका पतिले ५ हजार डलर तिर्न राजी भएको बताइएको छ। यति मात्र होइन, श्रीमतीलाई जति बढी ड’र दे’खाउँन सक्यो उति नै बढी पैसा थ’पिनसक्ने भनी बताएका थिए।
लेरोयले खासगरी यस्तै सेवाका लागि फेसबुकमा सूचना दिने गरेको प्रमाणका आधारमा उनीमाथि ग’म्भी’र आ’रो’प नलगाइएको अदालतले जनाएको छ।
घरभित्र सरसामग्रीसहित पसेका दुई व्यक्तिमध्ये एकले ‘तिम्रो नाम केभिन हो ?’ भनी सोधेका थिए। घरधनीले होइन भनेपछि उनीहरुले आफू आउनुका कारण बताएका थिए। आफूले कसैलाई नडाकेको बताएपछि ‘सरी भाइ’ भन्दै घरबाट निस्किएका थिए।
यसलगत्तै आफ्नो घरमा दुई जना अपरिचित व्यक्ति छिरेको भन्दै प्रहरीलाई ती घरधनीले खबर गरेका थिए। यस घटनाको केही मिनेटपछि उनीहरु सही घरमा छिरेका थिए। प्रहरीले लेरोय र उनका साथीलाई फोन गरिएको एक घण्टामा पत्ता लगाई प’क्राउ गरेका थिए।